Itoobiya oo qorsheyneysa iney iska hor keento Madaxweyne Farmaajo & Musharaxiinta isbedel doonka ah. | Nabadqaad Online
Itoobiya oo qorsheyneysa iney iska hor keento Madaxweyne Farmaajo & Musharaxiinta isbedel doonka ah.
Xaruunta Wada-xaajoodka, Cilmi-baaritsa iyo Iskaashiga (The Centre for Dialogue, Research and Cooperation) oo hoos tagta Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Ethiopia ayaa walaac xooggan ka muujisay Caqabadaha uu Madaxweyne Farmaajo kala kulmi karo Musrashixiintii looga guuleystay Doorashaddii Madaxtinimadda ee uu isagu ku guuleystay bishii hore ka dhacday Somalia.
Warbixinta waxaa lagu soo qaaday in Madaxweyne Farmaajo la caleema-saray bishii February 22-dii, iyadoo ay Hoggaamiyayaal ka socday dalalka deriska, gaar ahaan Madaxweynayaasha Jabuuti, Kenya iyo RW Ethiopia ka soo qeyb galeen Munaasabadda lagu caleemo-saarayey Madaxweynaha, iyagoo muujiyey Ballanqaadkooda ku aadan inay Dowladda Cusub ee Somalia kala shaqeyn doonaan sidii loo xoojin lahaa Xiriirka Somalia iyo Dalalkooda iyo Deganaanshaha iyo Ammaanka Somalia.
Warbixinta Bilaha ee Xaruuntaas (CRDC) oo ka koobnayd 10-Bog waxaa kaloo lagu lafa-guray Magacaabista RW-Kheyre, khibradiisa iyo Taageeradda uu ka helay Odayaasha Dhaqanka iyo Maamul-gobaleedyadda K/G iyo Jubbaland .
Warbixinta waxaa kaloo lagu muujiyey inay qaar ka mid ah Murashixiintii Madaxtinimadda ee guul-daraystay ka caraysan yihiin Ballan-ka-baxyo ay sheegeen inay Madaxweyne Farmaajo kala kulmeen, waxayna u muuqdaan Siyaasiyiin Mucaradsan Dowlada Madaxweyne Farmaajo.
Warbixinta waxaa lagu xusay in Wakiilo Ganacsato ka soo jeeda Beesha Abgaal booqdeen Dekedda Ceel-Maraan iyo garoonka dabeeciga ah ee Cisileey oo laga yaabo inay kaga biyo-diidsan yihiin Dekedda Muqdisho, issla markaana muujinayso calaamad looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqii Doorashadda sida warbixinta lagu qoray.
Warbixinta Xaruunta Wada-xaajoodka, Cilmi-baaritsa iyo Iskaashiga (The Centre for Dialogue, Research and Cooperation) waxay hoos ugu daadegtay Saluugga Beelaha ee Dowladda Madaxweyne Farmaajo, iyadoo Beelaha qaar u arkaan sidii guul-darro iyo in laga yaabo inay dib u eegaan Istaraatijiyeynta dhaqdhaqaaqooda Mustaqbalka.
Xiisad kale ayaa Warbixinta lagu sheegay inay ka dhalan karto haddii ay Beelaha muhiimka iska waayaan ama ay saluugaan xubnaha ay ka helaan Golaha Wasiiradda ee lagu dhawaaqi doono iyo Waxqabadka 100-ka maalmood ee Dowladda Madaxweyne Farmaajo iyo sida uu u maareyn doono xiriirka uu la leeyahay Maamul-gobaleedyadda, gaar ahaan Jubbaland oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya Qabaa’illadda daga maamulka Jubalanad .
Warbixinta waxaa kaloo ku jiray Baragaraaf lagu muujiyey wax kasta oo ka dhaca Somalia inay saamayn doonaan Ethiopia iyo dalalka kale ee deriska.